အစ္စလာမ်ရေးရာ | Burma Muslim
Category Archives: အစ္စလာမ်ရေးရာ
Masjid Al -Aqsa ရဲ့ အတွင်းအပြင်ဘက် ပုံရိပ်များ။
By burmamuslim on July 25, 2014 | Leaveacomment
စွဗ်ဟားနလ္လားဟ် အလွန်တရာ လှပခန့်ညားသော အစ္စလာမ့် သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ် ဖြစ်တဲ့ Masjid ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Masjid ရဲ့ သမိုင်းနဲ့ အရေးပါပုံဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအတွက် အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှာ ဟိုးယခင် နှစ်ထောင်နဲ့ ချီနေတုန်းကလဲ ပါရှိခဲ့သလို နောင် ၁ ချိန်မှာလဲ ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး ရစူလွလ္လားဟ် စွလ္လလ္လာားဟူအလိုင်းဟေ ၀စလ္လာမ် ကိုယ်တော်သည် Buraq ဆိုတဲ့ နတ်မြင်းပျံကြီးကို စီးပြီး မေ့ရားဂ်ျ ကောင်းကင် ခရီးကို သွားခဲ့တာလဲ Masjid Al- Aqsa ကနေပါပဲ။ တမန်တော် မြတ်ကြီးဟာ Buraq နတ်မြင်းပျံကို Masji al-aqsa ရဲ့ အနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်းမှာ ချည်နှောင်ပြီး Msajid ထဲမှာ နမားဇ် ၀င်ရောက် ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
မူဂျာဟေဒီးန်တို့နဲ့အတူ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဟာ ၁ နေ့ အီစာ အလိုင်းဟေစလ္လာမ်နှင့် အီမာမ် မဲဟ်ဒီ တို့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေ အဖြစ်နဲ့ ရအောင် တက်သိမ်းယူမယ့် Masjid ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ နယ်မြေ ဖြစ်ပီး ခုလက်ရှိ အစ္စရေးတွေရဲ့ နယ်နမိတ်ထဲမှာ အသိမ်းခံထားရပါတယ်။ မူဂျာဟေဒီးန် တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဟာလဲ ၁ နေ့ ထို Masjid ကို သိမ်းယူပြီး အစ္စလာမ့်ရဲ့ Emperor ကို တည်ထောင်ဖို့ပါပဲ။
အင်န် ရှာ အလ္လာဟ် ၁ ရက် ကျနော်တို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
Prophet Roza Park: တမန်တော်မြတ် ရောင်ဇွာတော်ပါက် ဂူသချိုင်္င်းတော်
By burmamuslim on July 17, 2014 | Leaveacomment
Sittwe, Arkan as tornado crossed:စစ်တွေ တွင် လေ မုန် တိုင်း ဒုက္ခ သည် စ ခန်း များ စွာ ပျက်စီး
By burmamuslim on July 16, 2014 | Leaveacomment
လေဆင်နှာမောင် တိုက်ခံခဲ့ရတယ် အောက်ပါ ပုံများ
Total 37 shelters andaprimary shool were broken and5Rohingya idps got injuries in Dar Paing (Rubber Garden) idp camp,Sittwe,Arkan as tornado crossed at 11:15 PM yesterday 16.7.2014.Injured people are been given treatment in That Key Pyin clinic,Sittwe,Arkan.
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ဒါးပိုင်းကျေးရွာ ရော်ဘာခြံ မှာရှိသောဒုက္ခသည်စခန်း စုစုပေါင်း ၃၂ ဆောင် လေဆင်နှာမောင် တိုက်ပြီးပျက်ဆီးသွားတယ်
ကလေး ၃ ယောက်နှင့်လူကြီး ၄ ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
By burmamuslim on July 15, 2014 | Leaveacomment
Fasting mat be the best way to combat cancer: ရိုဇာဥပုသ် စောင့်ထိန်းခြင်း ဟာ ကင်ဆာရောဂါကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်
By burmamuslim on July 13, 2014 | Leaveacomment
ရိုဇာ ဥပုဒ် စောင့်ထိန်းခြင်းဟာ ကင်ဆာရောဂါကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ကို ကမ္ဘာကျော် Time မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြပေး သွားပါ တယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာမှာ အကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ရပ် မှန်သမျှ ဘယ်အရာမှ မရှိပါဘူး။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဖြစ်ရတဲ့ အပေါ်မှာ အစဉ်အမြဲ ဂုဏ်ယူလျက်ပါ။
Posted in: ဗဟုသုတ, အစ္စလာမ်ရေးရာ
ဂျီဟာဒ်ဆိုသည်မှာ (Jihad in Islam)
By burmamuslim on July 6, 2014 | Leaveacomment
အခါမိမိအသက်ကိုပဓါနမထားဘဲအမှန်တရားတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသာ”ဂျီဟာဒ်”ဟုခေါ် သည်။ လိုအပ်လျင်
လည်း”ဂျီဟာဒ်”တစ်မျိုးကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ရဲများသည်သူခိုး၊လူဆိုး၊ရာဇဝတ်ကောင်များ အတွက် လက်နက်ကိုင်
By Alison John. —
Posted in: အစ္စလာမ်ရေးရာ
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မဂိုနောက်ဆုံးမင်းဆက် အုတ်ဂူရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ
By burmamuslim on June 28, 2014 | Leaveacomment
ဗြိတိသျှအစိုးရက ရန်ကုန်ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ နောက်ဆုံး မဂိုမင်းဆက် မဟာဒူးရှားဇဖားဟာ ၁၈၆၂ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ – Rex/Universal History Archive
ပါကစ္စတန်သမ္မတ အဆစ်ဖ်အလီဇာဒါရီ တစ်ယောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ
မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်လာခဲ့စဉ်မှာ ရန်ကုန်က အထူးအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ
အဲဒါကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးမဂိုမင်းဆက် (၁၈၃၇-၁၈၅၇) ဗဟာဒူးရှားဇဖားရဲ့ ဂူဗိမ္မာန်ပါ။
အဲဒီမှာ သူက အမှတ်တရပန်းခွေချခဲ့ပြီး ဂူဗိမ္မာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကိုလည်း
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
“ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသောခေတ်တွင် နေ၀င်ချိန်ကိုရောက်ခဲ့ရသော်လည်း သည်းခံခြင်းတရားကို
လက်မလွှတ်ခဲ့သော၊ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အမြဲသိမြင် ချီးမွမ်းခဲ့သော၊
လူမသိသည့် ကဗျာဆရာတစ်ဦးအဖြစ် ကဗျာများ ဆက်လက်သီကုံးခဲ့သူ မဂိုနောက်ဆုံးမင်းဆက်
ဗဟာဒူးရှားဇဖားအား ကျွန်ုပ် လေးစားစွာဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်”လို့ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစားအုပ်
မှာ သမ္မတက အမှတ်တရ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီနေရာဟာ ပါကစ္စတန်သမ္မတရဲ့ အရေးပါတဲ့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်
ဗဟာဒူးရှားဇဖား ကို(တာကိုမဂိုမျိုးနွယ်ရဲ့ ဆွန်နီမွတ်စလင်မ် ပါရှားမင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့)Timurid
မင်းဆက်အင်ပါယာအတွင်း ၁၇၇၅ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
၁၈၃၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကျော်
အူရ်ဒူကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သလို အဆင့်မြင့်လှတဲ့
စာလုံးအလှရေးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဇဖားဟာ သူ့အသက် ၆၂ နှစ်မှာ မဂိုဘုရင် ဖြစ်လာခဲ့ပါ
ဒါပေမဲ့ သူဟာ ရုပ်သေးရုပ်ဘုရင် တစ်ဦးသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တိုင်းရေးပြည်ရေးကို
စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ကဗျာဆရာတွေဟာ ကြီးကြီးမားမားတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းမှာ
၁၈၅၇ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီကို အိန္ဒိယသားတွေက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင် တော်လှန်
Sepoy Mutino လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဒီပုန်ကန်မှုကို ၁၉ ရာစုအတွင်း ဥရောပအင်ပါယာကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့
တော်လှန်ရေးတွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံး ကိုလိုနီစနစ် တော်လှန်ရေးအဖြစ် သမိုင်းပညာရှင်တွေက
ဒီပုန်ကန်မှုကြောင့် ဇဖားဘုရင်ဟာ သူ့မိသားစုဝင်တချို့နဲ့အတူ ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဆီ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဇဖားဟာ တော်လှန်ရေးကို အားပေးထောက်ခံသူအဖြစ် သူ့အလိုလို ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံက ဟိန္ဒူတွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေအားလုံးကို စုစည်း ညီညွတ်မှုရှိအောင် လုပ်နိုင်တဲ့
ခေါင်းဆောင်ဟာ သူပဲရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ဒေသခံလယ်သမား တော်လှန်ရေး
တပ်သားတွေဟာ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီမှာ သူ့ကို စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် သူ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ စာရင်းသွင်း
သူက ကန့်ကွက်ပေမယ့်လည်း ဥရောပသား ၅၂ ဦးအသတ်ခံရတဲ့ အမှုမှာ သူလည်း ပါဝင်
၁၈၅၇ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီကို အိန္ဒိယသားတွေ တော်လှန်စဉ်အတွင်း ဇဖားဘုရင်နဲ့ သားတော်တွေဟာ ဒေလီမှာတည်ရှိတဲ့ မွန်ဂိုဧကရာဇ် Humayun ရဲ့ အုတ်ဂူမှာ သွားရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ – Wikimedia Commons
ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ သူ့ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ သူပုန်တွေကို အားပေးကူညီမှုအတွက်
ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကတော့ သူ့ကို ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်တိုက်ပွဲဝင်သူ
စွဲချက်တွေအားလုံး အတွက် သူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုတော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ မဂိုအစိုးရနဲ့ အပေးအယူ
မညှိနှိုင်းတော့ဘဲ နိုင်ငံရဲ့အာဏာကို သိမ်းယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဗြိတိသျှအစိုးရအဖွဲ့
(၁၈၅၈-၁၉၇၄) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ဇဖားဘုရင်ကိုတော့ တခြားအပြစ်ဒဏ်မချဘဲ ပြည်နှင် ဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကို မိဖုရား ဇိနတ်မဟာလ်နဲ့ ကျန်တဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင် တချို့နဲ့အတူ ရန်ကုန်ကို
သူ့မိသားစုဝင်တော်တော်များများကို ဗြိတိသျှဗိုလ်မှူးဝီလျံဟော့ဒ်ဆန်က ဒေလီမှာ ချက်ချင်း
သုတ်သင်ခဲ့ပြီး သားတော်သုံးပါးရဲ့ ဦးခေါင်းကိုလည်း ဇဖားဘုရင်ဆီ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေလီကနေ သူထွက်သွားရတဲ့အနေအထားဟာ ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းကနေ ၁၈ ရာစု
အစောပိုင်းအတွင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်လောက် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်လေးမှာ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့
ပါရှားက စတင်ခဲ့တဲ့ မဂိုမွတ်စလင်အင်ပါယာဟာ အောင်မြင်မှု အထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့
အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်ကို အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအင်ပါယာလက်ထက်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဖြစ်ထွန်းစည်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
တူညီတဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကို စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံကို ပေါင်းစည်းခဲ့
သလို မြို့တော်ကြီးတွေကိုလည်း ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။
တပ်ဂ်ျမဟာ၊ ရက်ဒ်ဖို့တ်ခံတပ်၊ အာဂရာခံတပ်၊ လာဟိုက ရှယ်လီမာဥယျာဉ် စတာတွေဟာ
မဂိုတွေ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး အဆောက်အအုံတွေထဲက တချို့ပါ။
အဲဒီအဆောက်အအုံ တော်တော်များများကို အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတွေအဖြစ်
By burmamuslim on June 27, 2014 | Leaveacomment
စပိန်နွားရိုင်းသတ်ပွဲကျင်းရာ အဆောက်အအုံ ဥရောပရဲ့ အကြီးဆုံးဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိ
By burmamuslim on June 26, 2014 | Leaveacomment
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာရှိ အထင်ကရ နွားရိုင်းသတ်ပွဲကျင်းပတဲ့ ကွင်းနဲ့အဆောက်အအုံကို ဥရောပရဲ့ အကြီးဆုံးဗလီအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ကာတာစော်ဘွားတွေက ၀ယ်ယူမယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်လို့ မြို့တော်ကောင်စီက ၀ယ်ယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် လူသောင်းနဲ့ချီပြီး ၀တ်ပြုနိုင်မယ့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
“နွားရိုင်းတွေ နာကျင်ခဲ့ရတဲ့ဒီနေရာကို ဘာသာရေးသန့်စင်မှုစင်တာအဖြစ် မွတ်စလင်တွေက ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံတွေကလည်း ဂုဏ်ယူကြမှာပါ”လို့ ဘာစီလိုနီက အာရဗီစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် မိုဝါဖတ်ကန်ဖတ်က ရုရှားတူဒေးသတင်းဌာနကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေကလည်း လူတိုင်းကို စီးပွားရေးကိုအခြေမခံဘဲ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နေရာမှာ ၀တ်ပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်”
ရုရှားတူဒေးသတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဘာစီလိုနာရဲ့ ခံညားထည်ဝါတဲ့ အထင်ကရ နွားရိုင်းသတ်ကွင်းကို ကာတာစော်ဘွားက ပေါင် ၂.၂ သန်းနဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းတာကို သဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကယ်လို့ မြို့တော်ကောင်စီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရရင် ၂၀၂၀ မှာ လူပေါင်း ၄သောင်းကျော် တစ်ပြိုင်နက် ၀တ်ပြုနိုင်မယ့် ဥရောပတိုက်ရဲ့ အကြီးဆုံး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီ ဗလီသစ်ကြီးမှာ မက္ကာနဲ့ မဒီနာပြီးရင် တတိယအကြီးဆုံး မီနာရာ(မျှော်စင်)ဖြစ်လာမယ့် မီတာ ၃၀၀ အမြင့် မျှော်စင်တစ်ခုလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ လူဖတ်အများဆုံး သတင်းစာ 20 Minutos မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗလီကြီးမှာ ညီလာခံခန်းမ၊ ကုရ်အာန်သင်ကြားရေးစင်တာနဲ့ အစ္စလာမ့်သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ ပြတိုက်တွေကိုလည်း တွဲဖက်ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာက ဘလန်နာအဖွဲ့က ရောင်းချဖို့သဘောတူပြီးသားပေမယ့် မြို့တော်ကောင်စီက ခွင့်ပြုချက်ရဖို့အတွက်တော့ ဆွေးနွေးရပါဦးမယ်လို့ စပိန်သတင်းစာက ထည့်သွင်းဖော်ပြပါတယ်။
၁၉၁၄ ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဒီနွားရိုင်းသတ်ပွဲရုံကြီးမှာ နာမည်ကြီး ဘီးတဲလ်၊ တီနာတာနာ၊ ရိုးလင်းစတုန်းနဲ့ ဘော့ဘ်မာလေး စတဲ့ ဂီတအဖွဲ့တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ကျင်းပဖူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ကာတာလိုနီးယားမှာ နွားရိုင်းသတ်ပွဲတွေ ပိတ်ပင်လိုက်ကတည်းက ကွင်းမှာ ပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပတာတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို နွားရိုင်းသတ်ပွဲရုံကို ဗလီနေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတာဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းကလည်း လတ်စ်အရီနာနွားရိုင်းသတ်ကွင်းကို ဘာစီလိုနာမြို့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ အလားတူ အစီအစဉ်မျိုး ပြုလုပ်ဖို့ ညှိနှိုင်းဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစီအစဉ် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မြို့တော်ကောင်စီက ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
<<< ဒုတိယမိ ရှင်သန်ခြင်း >>>
ဘာစီလိုနာစာရင်းအင်းဌာနရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်ဦးရေဟာ အနည်းဆုံး ၅ သိန်းရှိပြီး လူဦးရေ များပြားပေမယ့် မွတ်စလင်တွေအတွက် ၀တ်ပြုစရာကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲ အိမ်ငယ်လေးတွေသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ စပိန်နိုင်ငံဟာ အေဒီ ၇၀၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၆၁၄ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အုပ်ချုပ်သူတို့ လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ရေခံမြေခံ တိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်းပဲ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေအရ ခရစ်ယာန်သာသနာပြီးရင် ဒုတိယဘာသာအဖြစ် အစ္စလာမ်ကို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
စပိန်အစ္စလာမ်ကော်မရှင်ရဲ့ စာရင်းအရ စပိန်နိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်ဦးရေ ၁.၄ သန်းရှိပြီး နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: သတင်း, အစ္စလာမ်ရေးရာ
မွတ်စလင်နှင့် အာရဗ်ကမ္ဘာအတွက် ပထမဆုံးဖြစ်လာမည့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဂျော်ဒန်မင်းသား ဇိုက်ဒ်အလ်ဟူစိုင် ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း …
By burmamuslim on June 19, 2014 | Leaveacomment
ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၄| စိုင်ဖုလ္လာဟ်(Myanmar Muslim Media )တင်ပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးအဖြစ် ဂျော်ဒန်မင်းသား ဇိုက်ဒ်အလ်ဟူစိုင်ကို အတည်ပြုရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။
လက်ရှိ မဟာမင်းကြီးဖြစ်သူ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ နာဗီပီလေး၏ နေရာတွင် တာဝန်ဆက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှစ၍ သက်တမ်း ၄ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဇိုက်ဒ်သည် မွတ်စလင်နှင့် အာရဗ်ကမ္ဘာတွင် ပထမဆုံးသော ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် အာရှတိုက်သားများအနက်လည်း ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။
ဇိုက်ဒ်သည် ဘန်ကီမွန်းနှင့်အပြိုင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူးအတွက် အမည်စာရင်း ပေးသွင်းခံရသူဖြစ်ပြီး အာရှသား နှစ်ဦးအနက် တောင်ကိုရီးယားမှ ဘန်ကီမွန်းက အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာ သည်။ ယခုအခါ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီးမွန်း၏ အမည်စာရင်းပေးသွင်းမှုဖြင့် ဇိုက်ဒ်ကို လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းသား ဇိုက်ဒ်အလ်ဟူစိုင်၏ profile အကျဉ်း
မင်းသား ဇိုက်ဒ်ဘင် ရအဒ်ဇိုက်ဒ်အလ်ဟူစိုင်ကို အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားတော်ဝင်မိသားစုမှ မင်းသား ဇိုက်ဒ်ဘင် ရအဒ်နှင့် ဆွီဒင်လူမျိုး မိခင်ဖြစ်သူတို့မှ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အမ္မန်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။
ဗြိတန်တွင် ကျောင်းတက်ပြီး ၁၉၈၇ တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်မှ B.A ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကမ်းဘရစ်ဂ်ျတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဘွဲ့ရခဲ့သည်။
မင်းသားဇိုက်ဒ်သည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး ယင်းရာထူးကို ၂၀၀၀-၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ခြောက်နှစ်ခွဲ တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၆-၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင် သံအမတ်အဆင့်ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဒန်သံအမတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဌာနေမဟုတ်သော မက္ကဆီကို နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်အဖြစ်ပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်သည်။
၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီလတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပြီး ပိတ်ဆို့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရသော ကွန်ဂိုနှင့် လိုင်ဘီးရီးယား နှစ်နိုင်ငံအရေးဆောင်ရွက်သော ၁၅၃၃ နှင့် ၁၅၂၁ ကော်မတီ၏ အကြီးအကဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းသည် နျူကလီးယားလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွင် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၂ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ထိတွင် လိုင်ဘီယားနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစီအစဉ်အတွက် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကော်မရှင်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံး၏ တရားလိုရှေ့နေ ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ သဘာပတိဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၉၆ -၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး (ICC) တွင်အောက်ပါကဏ္ဍများတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၂-၂၀၀၅ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ညီလာခံတွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဂျီနိုဆိုက်၊ စစ်ရာဇ၀တ်နှင့် လူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ်ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများအပါအ၀င် လူစုဖြင့် တစ်ဦးချင်း ကျူးလွန်မှုများကိစ္စ တရားမ၀င်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကဏ္ဍတွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၂၀၁၀ ဇွန်လတွင် ကမ်ပလာမြို့ရှိ ရောမဥပဒေ၏ ကျူးကျော်ရန်စမှုဆိုင်ရာရာဇ၀တ်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် အစည်းအဝေး၌် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၉၆-၂၀၀၆ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂတွင်ရှိစဉ်က ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေကော်မတီ(UNIFEM)၏ အကြံပေးကော်မတီတွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၄-၂၀၀၆ ခုနှစ်များတွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် စော်ကားမှုရေးရာအတွက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အကြံပေးဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၄-၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ယူဂိုစလားဘီးယားနိုင်ငံရှိ် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရုံး၌ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကျင်းပခဲ့သော “နိုင်ငံတကာဥပဒေအတွင်းမှ အမေရိကန်အသိုင်းအ၀ိုင်း”၏ ၁၀၂ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် “တိုင်းပြည်နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချစ်မြတ်နိုးရန်”အကြောင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
မင်းသားဇိုက်ဒ်သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာအတွက် အကြံပေးကောင်စီဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး သမိုင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအင်စတိကျူ၏ အကြံပေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဂျနီဗာအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးအဖြစ် နာဗီပီလေး၏ ရာထူးနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး ရာထူးကို လာမည့် စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှ စတင် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
မင်းသားသည် UNICEF တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အမေရိကန်အမျိုးသမီး ဆာရာဘတ္တလာနှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၌ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး (၃)ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
– စိုင်ဖုလ္လာဟ်(Myanmar Muslim Media )တင်ပြသည်။
Ref : Wikipedia & News